Global Voices teny Malagasy » Mety hitarika sivana antserasera ve ny lalànan’ny fiarovana antserasera ao Fiji? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Janoary 2019 8:34 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Oseania, Fiji, Fahalalahàna miteny, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, GV Mpisolovava
Fivarotana lalao an'aterineto ao Fiji. Sary avy amin'ny pejy Flickr an'i Michael Coghlan, (CC BY-SA 2.0).
Manomboka manan-kery amin'ity volana ity ao anatin'ny ahiahy fa hampiasaina hanivanana ny aterineto ny Lalànan'ny fiarovana an-tserasera ao Fiji.
Nolaniana  tamin'ny volana Mey 2018 ny lalàna, roa volana taorian'ny nametrahan'ny biraon'ny mpampanoa lalàna izany mba hodinihan'ny parlemanta. Nilaza ny governemanta fa ilaina mba hahatonga ny aterineto ho toerana azo antoka ho an'ny vehivavy sy ny ankizy izany:
Niditra tamin'ny tamin'ny fampiroboroboana ny kolontsaina sy tontolo iainana antserasera azo antoka ny governemanta Fijiana amin'ny fahavononany hiantoka ny fidirana amin'ny fifandraisana aterineto ho an'ny Fijiana rehetra, izany dia noho ny fitomboan'ny tatitra vao haingana momba ny fitondran-tena manimba antserasera toy ny fanorisorenana antserasera, fandrahonana antserasera sy ny fandotoana rindrina antserasera ary ny fampisehoana votoaty manafintohina na mampidi-doza, indrindra ho an'ny ankizy.
Tombanana ho 500.000 eo ireo mpisera aterineto mavitrika ao Fiji.
Napetraka teo ambany fifehezan'ny fanjakana ny fampitam-baovao Fiji taorian'ny fanonganam-panjakana nokonokononin'ny miaramila tamin'ny taona 2006. Nolaniana tamin'ny taona 2010 ny Didim-panjakana momba ny fampandrosoana ny indostrian'ny fampahalalam-baovao izay nankatoa ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety saingy nitarika tamin'ny fanivanan-tena teo amin'ny sehatry ny fampitam-baovao ny tahotra famaizana ataon'ny fanjakana. Mandritra izany fotoana izany, dia nahatonga ny olom-pirenena hampiasa ity sehatra ity mba hizara ny fomba fijeriny, mitatitra vaovao hafa, ary hampihetsika ireo tompon'andraikim-panjakana ny fitomboan'ny fampiasana media sosialy tato anatin'ny taona vitsy.
Milaza ny tatitra sasany fa raha miresaka momba ny fampitam-baovao mahazatra ny didim-panjakana momba ny fampandrosoana ny indostrian'ny Media, dia natao hifehezana ny fampitam-baovao sosialy kosa ny lalàna momba ny fiarovana antserasera.
Mpikambana efatra ambin'ny folo tao amin'ny mpanohitra no nitsipaka ny Volavolan-dalàna momba Fiarovana Antserasera izay nolazain'izy ireo fa hanohintohina ny demaokrasia.
Saingy niadihevitra momba izany ny sasany tamin'ireo mpanohana ny lalàna:
Milaza ireo mpanohitra ny volavolan-dalàna momba ny fiarovana antserasera fa tsy ara-demokratika ny lalàna. Inona no maha-demokratika ireo sary vetaveta miparitaka antserasera? Ahoana raha ny zanakao vavy na zafikelinao vavy no voakasika? Handray andraikitra amin'izany ve ny mpanohitra ?
Fiji Sun Online, vavahadim-baovao lehibe, namoaka fanehoan-kevitra manohana  ny fepetra:
Ny volavolan-dalàna momba ny fiarovana antserasera nolaniana dia hiaro ny Fijiana tsy ho lasibatra ao amin'ny media sosialy izay mihamitombo ankehitriny. Hahatonga ireo mpisera aterineto hisaintsaina indroa mialoha ny handefasana zavatra antserasera izany.
Nanonona ny ampahany faha-efatra amin'ny lalàna ho mametraka olana ireo mpitsikera, satria mety hampihorohoroana ireo mpisera aterineto izany. Ity fepetra  manokana ity dia mihevitra fa “fandikan-dalàna ny famoahana fifandraisana elektronika amin'ny fikasana hanisy ratsy olona” ary saziana dimy ka hatramin'ny fito taona.
Ankoatra ny sazy an-tranomaizina, hosaziana handoa onitra hatramin'ny 20.000 FJD (9.440 dolara amerikana) tsirairay koa ireo hita fa meloka noho ny fanitsakitsahana ny lalàna
Nampitandrina ireo mpanohitra ny lalàna fa midadasika loatra ny hoe “mitera-doza” raisina fa fandikan-dalàna ka azo raisina fa votoaty tsy ara-dalàna hatrany izay fanehoan-kevitra manohitra.
Jope Tarai avy ao amin'ny Oniversiten'i Pasifika Atsimo nanamarika fa toa maka tahaka sy mamerina manao ny asan'ny Sampana misahana ny heloka antserasera ataon'ny polisy ny komity misahana ny fiarovana antserasera araka ny fizarana faha-enina ao amin'ny lalàna. Ankoatra ny fametrahana sampana vaovao izay hanaramaso ny votoaty antserasera, manome fahefana lehibe ho an'ny komitin'ny fiarovana antserasera izay “naneho ny ahiahiny amin'ny mety hisian'ny fandrahonana ny fahalalahana miteny” ny lalàna.
Nampitandrina ihany koa ny manam-pahaizana  fa na dia eo aza ny fikasana nambara fa hametraka fiarovana, dia mety hitarika sivana amin'ny fahalalahana miteny ny lalàna:
Manambara “Fiarovana” antserasera ny lalàna voalaza, raha manokatra lalana ho an'ny “cheval de troie” ho an'ny “fifehezana” ny aterineto sy ny fanivanana ireo feo manohitra kosa ny fanjavozavonan'ny andraikitra amin'ny fahalalaham-pitenenana.
Ny fikasana nambara ao ambadiky ny Lalàna momba ny fiarovana antserasera dia azo antoka fa tena zava-dehibe sy efa nandrasana hatry ny ela raha mikasika ny fiarovana ny vehivavy, ny ankizy ary ireo niharam-boina tamin'ny fitondrantena antserasera tsy tompon'andraikitra. Na dia izany aza, tsy niraharaha ny herin'ny haino aman-jery sosialy ny fitantarana ‘loza’ nataon'ireo manampahefam-panjakana Fijiana tamin'ny endrika vaovao:
Nandritra ny fandinihana nataon'ny Parlemanta, nilaza ny ahiahin'izy ireo momba ny lalàna napetraka ny vondrona tanora:
Vondron-jatovo manahy momba ny fiantraikan'ity volavolan-dalàna ity amin'ny fahalalahana miteny ao Fiji izahay. Raha ankasitrahanay ny filàna fiarovana ny ankizy sy ny lehilahy ary ny vehivavy amin'ny valifaty sary vetaveta na fizarana sary na lahatsary manokana tsy nahazoana alalàna, manahy izahay fa midadasika loatra ity volavolan-dalàna ity, ka mety ampiasain'ny manam-pahefana amin'ny fomba tsy araka ny tokony izy mba hanasaziana sy hanenjehana ireo izay mizara ny hevitr'izy ireo, ary tsy mitovy ny fomba fijery ara-politika, izany hoe mety hampiasaina tsy araka ny tokony izy mba hanenjehana ireo mpanohitra ara-politika, fa tsy mampihatra ny tanjona hiaro ny ankizy amin'ny fampitahorana antserasera na fanararaotana hafa amin'ny aterineto.
Farany dia nampitandrina ny tambajotram-pampahalalam-baovaom-paritra Freedom Forum ao Pasifika (PFF) fa “hanampim-bava” ny lalàna vaovaon'ny fiarovana an-tserasera fa tsy hiaro ny vahoakan'i Fiji. Monica Miller, mpiara-mitantana ny PFF Polynesia nilaza hoe :
Maherin'ny dimy hetsy ankehitriny ny olom-pirenena voakasik'io lalàna io ary mila mahazo toky izy ireo fa tsy ho voantohintohina ny zon'izy ireo hizara hevitra sy vaovao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/23/134135/
 nanamarika : https://ojs.aut.ac.nz/pacific-journalism-review/article/view/443?fbclid=IwAR3axL1g7afpGRUypqaekhK-6SHMVfmrMhvFTLATd0BarVMTfT2vVRvHx1s
 nilaza : http://www.parliament.gov.fj/wp-content/uploads/2018/05/Standing-Committee-on-JLHR-Report-on-the-Online-Safety-Bill-No-7-of-2018-part-1.pdf
 nilaza hoe: https://www.facebook.com/notes/pacific-freedom-forum/fiji-online-safety-laws-designed-to-muzzle-not-protect-citizens-pff/2596785203694996/